Laalida Natiijadii Doorashada kenya Maxay tahay tallaabada xigta ee dalku wajahayo ? – Idil News
Laalida Natiijadii Doorashada kenya Maxay tahay tallaabada xigta ee dalku wajahayo ?
Guddiga doorashada iyo xuduudaha Kenya ee (IEBC) waxaa ay shegeen inay diyaar u yihiin , kana go’antahay in muddo 2 bilood gudahood ah ay ku qabtaan doorasho , walow ay jirto walaac laga qabo in guddiga doorashada ay qaban karaan doorasho lagu kalsoonaan karo.
Madaxwayne Kenyatta oo xilka madaxtinimada hayay shanti sanno ee la soo dhaafay ayaa sheegay in uu ixtiraamayo go’aanka maxkamada ,balse uusan ku qanacsaneyn go’aanka maxkmadda. Waxaan uu ku baaqay in nabadda laga shaqeeyo.
Waxaana hubaal la’aantani ay noqon doontaa mid taagan, ilaa iyo inta doorashada ay ka soo idlaaneyso.